Hlawula iBhili yakho. Ulwazi lwezeMali zabafundi »IYunivesithi yaseHodges
Wamkelekile kwiiNkonzo zezeMali zabafundi
IOfisi yeYunivesithi yaseHodges yeeNkonzo zezeMali yaBafundi inikezela ngeengcali ezizinikeleyo zokukunceda ngoncedo lwezezimali, iiakhawunti zabafundi kunye nezisombululo zeencwadi zezifundo.
The umsebenzi yeOfisi yeeNkonzo zezeziMali zabafundi iya kugxila kwimpumelelo yemali yomfundi ngelixa ibonelela ngezona nkonzo ziphezulu kunye namathuba alinganayo ekunikezelweni kwemali. Sandisa amathuba okufikelela kunye nokufikelela ngokubonelela ngolwazi oluchanekileyo lwezezimali kunye nesikhokelo kunye nenkxaso eyenzelwe abafundi kunye neentsapho kwindawo ebandakanya ukusebenzisana kunye nentsebenziswano.
Iinkonzo zeMali Iinkcukacha zonxibelelwano
Ukuze ufunde kabanzi malunga Umncedi ngezemali, ezinje ngemali mboleko yomfundi / yabucala, izibonelelo zombuso / zikarhulumente, i-FAFSA, kunye nokuqinisekiswa kwe-FA:
Ifowuni - (239) 938-7758
Ifeksi - (239) 938-7889
Imeyile - finaid@hodges.edu
Ngolwazi malunga IiAkhawunti zabafundi, kubandakanya ukuhlawulwa kwemali yokufunda / yentlawulo, iintlawulo, izicwangciso zokuhlawula, ukuhlawuliswa komntu wesithathu, ukubuyiselwa kwemali, iifom ze-1098-T, njl.
Ifowuni - (239) 938-7760
Imeyile - sas@hodges.edu
Uncedo nge Isisombululo seencwadi, ezinje ngezixhobo zekhosi (iincwadi zomzimba, iincwadi ze-e, iincwadi zokufikelela), iifizi zezixhobo, kunye nokuqinisekiswa kweodolo:
Ifowuni - (239) 938-7770
Imeyile - universitystore@hodges.edu
Iimali ezibizwa ngokuba yi-Hodges University Resource FAQs.
Amaxabiso aNgoku amaXabiso eziBonelelo
Ufuna ukwenza iNtlawulo?
Bhatala imali yokufunda kunye neMali
online -Intlawulo zinokwenziwa ngekhadi letyala (MasterCard, VISA, okanye Discover) okanye ngetshekhi ye-elektroniki ngokuya ku myHUgo.
iposi -Itsheki yentlawulo inokuthunyelwa ngeposi kwiOfisi yeeNkonzo zezeMali zabafundi, i-4501 Colonial Blvd. Fort Myers, FL 33966. Nceda ufake inombolo yesazisi sakho somfundi kwitshekhi. Nceda ungathumeli imali ezinkozo (siyakwamkela ngovuyo ukubhatalwa kwemali).
mfono Ikhadi letyala (i-MasterCard, i-VISA, okanye i-Discover) okanye iintlawulo zetshekhi ye-elektroniki zingenziwa ngokutsala umnxeba (239) 938-7760.
Ngobuso -Yenza ikhadi lamatyala (MasterCard, VISA, okanye Discover), jonga, okanye ubhatele imali ngokuya kwiOfisi yeeNkonzo zezeMali zabafundi ezikwiNaples okanye eFort Myers
Izifundo kunye nezicwangciso zokuhlawula umrhumo ziyafumaneka kubafundi beYunivesithi yaseHodges. Izicwangciso zokuhlawula zinokubandakanya iindleko zokufunda, iifizi zenkqubo / umahluko wokufunda, iifizi zekhosi, iifizi zebhu, kunye nezinye iifizi ezinyanzelekileyo. Nceda unxibelelane nengcali yeakhawunti yomfundi kwiOfisi yeeNkonzo zezeMali zabafundi ngokutsalela umnxeba (239) 938-7760, nge-imeyile sas@hodges.edu, okanye undwendwele iikhampasi zethu zaseNaples okanye iFort Myers ukuze ufunde okungakumbi malunga nezicwangciso zokuhlawula.
Imihla yokuFundiswa ngenxa
Zonke iintlawulo zilindelwe, ngokupheleleyo, kusuku lokuqala lweklasi yokuqala ngeenyanga ezi-4 okanye iinyanga ezi-6 zobhaliso (UPOWER ™ kuphela). Ngolwazi oluthe kratya, nceda ubone apha ngezantsi.
Ukuba usebenzisa isicwangciso sokuhlawula, nceda unxibelelane nengcali yeakhawunti yomfundi malunga nemihla emiselweyo yentlawulo nganye.
Nceda uqaphele: Iintlawulo zibangelwe ngumhla obekiweyo wokuba uyasifumana okanye awusifumani ingxelo ngaphambi komhla omiselweyo.
Ulwazi lokubuyiselwa imali
Abafundi abafumana uncedo lwezemali
Abamkeli boncedo lwezezimali kufuneka ukuba iiakhawunti zabo ziphononongwe kwaye zamkelwe yiOfisi yeeNkonzo zezeMali zabafundi ngaphambi kokuba kukhutshwe imali. Ukuba uncedo lwezemali luhlengahlengisiwe, unokuba netyala lokubuyiselwa kwemali elikhutshwe liSebe leMfundo laseFederal okanye iSebe leMfundo laseFlorida ngokusekwe kwisixa sokuqala senkxaso.
Uhlengahlengiso kuncedo lwezezimali lunokuba sisiphumo sokutshintsha kweeyure zokuthenga ngetyala, utshintsho kumfaneleko womfundi kwiintlobo ezithile zoncedo, okanye ukusilela ukuhlangabezana neNkqubela phambili yezeMfundo eNelisayo (SAP).
Abafundi abafumana uncedo lwemali oluhlawulwe liTayitile IV yomthetho weMfundo ePhakamileyo ka-1992 abathi bayirhoxa ngokusesikweni bayakufumana imbuyiselo ngokweZilungiso zeMfundo ePhakamileyo zika-1998. IYunivesithi yaseHodges iyakumisela ukuba ingakanani iNtloko IV yoncedo umfundi ayifumeneyo engayifumani ngelo xesha yokurhoxa ngokupheleleyo. Isixa soncedo olufunyenweyo sibalwa ngendlela ebekiweyo.
Ulwazi lwembuyekezo yoMfundi
Ukurhoxisa okanye ukuKhangela iikhosi
Umfundi unokurhoxa ngaso nasiphi na isizathu kwaye unoxanduva lokugqibezela iinkqubo zokurhoxa ezisemthethweni zeYunivesithi njengoko kuchaziwe kuMgaqo-nkqubo wokuKhutshwa. Ukongeza, ukuba umfundi ubhalise nge-portal yomkhosi okwi-Intanethi, luxanduva lomfundi ukurhoxa nge-portal efanayo yomkhosi ekwi-Intanethi.
Ukurhoxiswa kuthathelwa ingqalelo ukuba kwenzeke ngomhla wokungenisa ngokusemthethweni ifom yokurhoxa okanye ngomhla iYunivesithi emisela ukuba umfundi uyeke ukuya okanye ukusilela ukuhlangabezana nemigaqo-nkqubo epapashiweyo yezemfundo kwaye urhoxisiwe kulawulo, nokuba yeyiphi eza kuqala.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nemigaqo-nkqubo yokurhoxa kwiYunivesithi, nceda ubone Ikhathalogu yaseYunivesithi.
Njengoko ikhosi nganye iqala kwixesha lakho lokuqalisa lenyanga (ixesha leenyanga ezi-4), ukufaneleka kwakho koncedo lwezezimali kuya kuvavanywa ngokusekwe kubume bakho bobhaliso ukumisela ukuba / xa kunikezelwa ngoncedo lwezezimali kwaye ukuba / xa umfundi eza kufumana imbuyekezo. Isimo sobhaliso somfundi sisekwe kwiiyure zetyala ababhalise kuzo.
Abafundi kufuneka bazi ukuba abayi kufumana mbuyekezo de kube konke imali yokufunda kunye neefizi zihlawulwe ngokupheleleyo. Elokuqala nawaphi na ityala elinokuthi liveliswe kwiakhawunti yomfundi liya kuba ubuncinci kwiintsuku ezingama-32 emva kokufundiswa kunye neentlawulo zemirhumo ehlawulwe ngokupheleleyo.
Uncedo lwezeMali ukufaneleka
Nceda ujonge isikhokelo sobume boBhaliso apha ngezantsi ukuze siqwalasele umncedi ngezemali ukufaneleka ngokusekelwe kwiiyure zetyala ezisebenzayo:
Ngaphantsi kweXesha leXesha Ixesha lecala Ixesha Ixesha eliphelele
Iiyure ezisebenzayo zeTyala 1 - 5 6 - 8 9 - 11 12 okanye ngaphezulu
I-Federal PELL Grant * ¼ Kufanelekile ½ Kufanelekile ¾ Kufanelekile Ulungelelwaniso olupheleleyo
I-SEOG yaseburhulumenteni * Ayifanelekanga ½ Kufanelekile ½ Kufanelekile Ulungelelwaniso olupheleleyo
Isibonelelo se-EASE Grant * Ayifanelekanga Ayifanelekanga Ayifanelekanga Ulungelelwaniso olupheleleyo
Urhulumente FSAG * Ayifanelekanga Ayifanelekanga Ayifanelekanga Ulungelelwaniso olupheleleyo
Imali mboleko yaseburhulumenteni * Ayifanelekanga Ulungelelwaniso olupheleleyo Ulungelelwaniso olupheleleyo Ulungelelwaniso olupheleleyo
* Kuxhomekeke ekufanelekeni komfundi kuncedo lwezezimali / lwaseburhulumenteni.
Nceda ubone ukubuyiselwa kwemali kunye noncedo lwezezimali ngolwazi lomhla kwiKhalenda yeziganeko zabafundi kwi myHUgo.
Fumanisa Okuninzi Ngoncedo lwezeMali
1098 - Iifom
IziBonelelo zeRhafu zeMfundo ePhakamileyo, usebenzisa iFom ye-1098-T yeRhafu
I-American Opportunity (eyayisakuba yiThemba) kunye neekhredithi zeLifetime Learning zingafumaneka kuwe ukuba uhlawula iindleko zemfundo ephezulu. Ukukunceda ekubangeleni la makhredithi, iYunivesithi yaseHodges iya kufaka ifom ye-1098-T ngerhafu yenkonzo yangaphakathi (IRS) ngoMatshi 31st wonyaka ngamnye.
Olu lwazi alubonisi ngcebiso kwirhafu evela eyunivesithi, nanjengokuba luxanduva lomrhafi ukumisela ukufaneleka kwekhredithi. Nceda ungaqhakamshelani neYunivesithi yaseHodges malunga neengcebiso zerhafu ngeli tyala. Ukufumana ulwazi oluthe kratya kwiThuba laseMelika kunye nokuPhila ngokufunda ngetyala, nceda ujonge Ukupapashwa kwe-IRS 970-Izibonelelo zerhafu yeMfundo ePhakamileyo okanye nxibelelana neNkonzo yangaphakathi yeNgeniso ngqo (800) 829-1040. Ngemibuzo ethile malunga nolwazi olunikezwe ngaphakathi kwifom ye-1098-T, nceda unxibelelane neYunivesithi yaseHodges kule nombolo (239) 938-7760.
Iifom ze-FAQ ze-1098-T zerhafu
Ukuhlawulisa umntu wesithathu
Xa umbutho, ongengowomfundi okanye amalungu osapho, uzibophelela ekuhlawuleni iindleko zemfundo zomfundi, bathathwa njengomntu oxhasa iqela lesithathu yiYunivesithi yaseHodges. Xa intlawulo ifanelekile kwiakhawunti yomfundi, umxhasi uhlawuliswa yiYunivesithi. Le nkqubo yokuhlawula ithathwa njengotyalo-mali lomntu wesithathu.
Iintlawulo zabaxhasi zixhomekeke kwiimfuno ezifanayo zokunika ingxelo njengolunye uncedo lwezemali. Ezinye iinkxaso-mali azifuni i-invoice yokubiza kwaye zilawulwa yiyunivesithi ngeOfisi yeeNkonzo zezeMali zabafundi.
Nokuba ungumfundi okanye ungumxhasi, uya kufumana iimpendulo kwimibuzo ebuzwa qho (ii-FAQs) malunga nokuba ukuhlawulwa komntu wesithathu kusebenza njani kunye nendlela iintlawulo ezenziwa ngayo. Ukuba unemibuzo eyongezelelweyo okanye ufuna ulwazi oluthe kratya, nceda unxibelelane neOfisi yeeNkonzo zezeMali zabafundi kule nombolo (239) 938-7760 okanye sas@hodges.edu.
Ii-FAQ zeNtlawulo yeQela lesiBini kubaxhasi
Ii-FAQ zeNtlawulo yeQela lesiBini laBafundi
I-BankMobile, iCandelo leBhanki yabaThengi, liqhuba inkqubo yokubuyiselwa kwemali kwiYunivesithi yaseHodges kunye namanye amaziko emfundo aphakamileyo eMelika. Ngolwazi oluthe kratya malunga neBankMobile, tyelela le khowudi.
Cofa apha ukujonga ikhontrakthi yeziko lethu neBankMobile, iCandelo leBhanki yabaThengi.